Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyadaha Pacific-ga oo Guul lagu soo Gabagabeeyay ..
Shirkii Jaaliyadaha Pacific-ga oo Guul lagu soo Gabagabeeyay ..
Posted by ONA Admin	/ April 7, 2015
Sida aad kula socoteen wararkanagiii hore waxaa ka socday magaalada Melboune shirkii 9aad ee jaaliyadaha Pacific-ga shirkaas ee sanadla ahaa. Shirka jaaliyadaha Pacific-ga ayaa shalay abaaraha 4tii galabnimo lagu soo noqday waxaana furay gudoomiyaha jaaliyada Victoriya halgame Xasan Axmed nuur oo mar labaad xubnaha jaaliyadaha ee mintidka gumaysi diidka ku amaanay dadaalkooda aan hagarta lahayn ay ugu jiraan siday dalkooda iyo dadkooda gumaysatada Itobiya uga xorayn lahaayeen.
Fadhigan oo ka duwanaa kii shalay waxaa shir gudoominayay halgame Xikim sheekh Cabdulaahi isagoo war bixin laga dhagaystay afhayeenka JWXO naftii hure Cadaani hiirmooge oo mar labaad sii bayaamiyay xaaladda guud ee halganka uu marayo iyo liidanaanta gumaysiga. Ka dib, waxaa lagu soo dhaweeyay Isuduwaha jaaliyadaha Pacific-ga halgame Aadan Ibraahin c/raxman(aadan) oo ka warbixiyay wxaqabadkii jaaliyaadka Pacific-ga mudadiii sanadka ahayd ee u dhaxaysay labada shir sanadeed isagoo ku tilmaamay inay dhamaan u fuleen sidii loogu talagalay. Wuxuu mudane Adan Daqare kula dardaarmay jaaliyadaha Pacific-ga inayna ka daalin dadaalka inta yoolka la gaadhi.
Waxaa sidoo kale war bixino laga dhagaystay gudoomiyaasha jaaliyadaha Victoriya halgame Xasan Ahmed nur dheere, jaaliyadda Sydney halgame Shugri Shafeec, gudoomiyaha Perth halgame Asad Cabdulaahi Cumar oo dhamaantood ka war bixiyay habsami u socodka hawlaha jaaliyada iyo isku xirnaantooda. Warbixinadaa ayay xubnihii shirku aad usoo dhaweeyeen.
Waxaa kaloo war waafiiya shirka u soo jeediyay xidhiidhiyaha dhaqaalaha jaaliyadaha Pacific-ga halgame Ahmed Dalmar oo madasha ka soo jeediyay waxqabadka jaaliyaadka Pacific-ga cadayayna in Pacific-ga uu ku jiro hormuudka jaaliyadaha Ogaadeeniya ee caalamka. Waxaa kaloo warxino kooban laga dhagaystay xoghayaha guud ee OYSU halgame Jamal ugaas Xukun iyo xidhiidhiyaha Pacific-ga ee OYSU halgame Yaxye sheekh Cabdi oo iyaguna guud ahaan dulmaray hawlaha halgan uu u qabto ururka dhalinyarada.
Waxaa marnaba la iloobi karin oo hadal qiimo badan ka soo jeediyay madasha gudoomiyaha UHO marwo Roodo Ibraahim Cabdi oo ka ka hadashay arimaha UHO horyaala waqtiga fog iyo waqtiga dhow.
Waxaan iyana ka madhnayn siminaar lagu qaatay shirka oo uu soo jeediyay halgame Asad Cumar waxaa kaloo madasha sugaan halgameed ka soo jeediyay abwaan Kaldeeq Muuse. Waxaa sidoo kale socday doodo kooxeed lagu lafa gurayay arimaha jaaliyadaha iyo hawlaha halganka.
Isku soo wada duuboo waxaa shirkan oo ka gadisnaa shirkii hore ka soo baxay go’aano dhaxal gala, waxaana shirka oo guul ku soo idlaaday daadihinayay halgame Xikim sheekh Cabdulaahi iyo nafttii hure Nuur Faatule.